Bazary be Toamasina : Vaky lava ireo fivarotana ao anatiny
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2019 → juillet → 11 → Bazary be Toamasina : Vaky lava ireo fivarotana ao anatiny
Raha noheverina fa hilamina ireo mpivarotra ara-dalana ao anatin’ny bazary be Toamasina hatramin’ny nanamboarana azy hanaraka ny fenitra moderina, dia tsy izany no zava-misy fa lasa mitaitain-dava ireo mpivarotra manana fivarotana mihidy ao anatiny noho ny firongatry ny halatra sy famakiana ireo fivarotana tao ho ato izay. Tranga maromaro no efa niseho ary fivarotana dimy rahateo no efa voan’izany. Farany teo izao dia fivarotana lamba voazaitra miisa telo no nisy namaky indray alina tao Bazary be, nefa vao nahatonga lamba hamidy avy any ivelany ny tompony. Very avokoa ireo lamba rehetra, nefa ny bazary be tsy vaky ny vavahady fa teny an-tafontrano ireo andiana mpangalatra no niditra sy namaky ilay fivarotana. Efa eo am-pelantanan’ny polisy eto Toamasina ny raharaha ka ho hita eo ny tohin’ny raharaha. Talohan’ity tranga niseho ny herinandro nivalona teo ity, dia efa tratran’izany koa ity mpivarotra firavaka volafotsy sy entana ho an’ireo mpizahatany ary fahatsiarovana sy haingon-trano. Nampiantso mpanao gazety mihitsy mantsy ny tompony, satria raha nanao fanadihadiana izy ireo dia tratra tamin’ny olona roa, Fidison sy Pilasy, ny entana. Niditra an-tsehatra nanampy ireo olona ireo ny iray fiaviana taminy ary nilaza fa handany vola be haka mpisolovava sy mpitsara momba izao raharaha izao. Raha nivoaka tokoa ny didy ny 11 volana aprily teo, satria ny 04 aprily no natao ny fitsarana ny raharaha, dia afaka noho ny fisalasalana ireo roa lahy nahatrarana ny entana very nandritra izany. Noho izao firongatry ny famakiana fivarotana eo anivon’ny Bazary be Toamasina izao, dia milaza ny hanampy ireo mpiambina 05 efa misy ankehitriny ny mpivarotra.
Fanihy mahatsangy 11 juillet 2019 at 12 h 13 min · Edit
tsy moramora ny manao bizna ao Toamasina.Rehefa tsy maripototra ny porofo de afaka madiodio ny meloka ary tsy miafina ny mpanohana azy.Iray hafa:porofoy fa mora ny mamoaka ireo entana alatra avy eny ambony tafo.C’est un gang bien huile qui s’implante dans la region.
Rodrick 11 juillet 2019 at 10 h 37 min · Edit
Mampalahelo be: tsy efa mandoa vola isan’andro (ticket,etc…) miampy ny hetra aloa amin’ny commune contribution sns..ve ireo mpivarotra.Izao voatery handoa vola be hafa indray satria tsy milamina mihitsy ny tany ?..Fa ahôna marina eee…ssssss